Fokontany Ankasina : Tsy tomombana ny lisi-pifidianana -
AccueilSongandinaFokontany Ankasina : Tsy tomombana ny lisi-pifidianana
Diso fanantenana ny ankabeazan’ny mponina ao anatin’ny sektera telo, eny amin’ny fokontany Ankasina noho ny fahaverezana zo. Zara raha misy iray amin’ny olona sivy isan-tokantrano no tafiditra ao anatin’ny lisi-pifidianana. Mampiaka-peo eny anivon’ny fokontany ireo olona te-hifidy.
Andro vitsy sisa dia ho tapitra ny fotoan’ny fampielezan-kevitra sy ny fiomanana amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny 7 Novambra ho avy izao. Io fotoana kely io sisa no nanararaotan’ireo olona tsy dia manam-potoana firy noho ny asa sahaniny andavanandro, nijery ny anarany teny amin’ny fokontany, saingy fahadisoam-panantenana izany.
An-jatony tamin’ireo nisoratra anarana no tsy hahazo kara-pifidianana, ary mbola tsy tafiditra ao anatin’ny lisi-pifidianana. Hatreto anefa mahatsapa tena fa very zo ny ankabeazan’ireo olom-pirenena noho ny tsy fahitana ny anarany ao anatin’ny lisi-pifidianana. Ny mahagaga anefa dia ireo olona efa maty, izay nandefasana tatitra mialoha tany amin’ny vaomiera manokana misahana ny fifidianana dia toa mbola voasoratra ao anaty lisitra ihany. Manoloana izany, nitondra ny fitarainany na ny tompon’andraikitra eny anivon’ny fokontany na koa ireo olon-tsotra tsy ahazo fahafahana hifidy amin’ity taona ity. Hita taratra amin’ny fihazakazahan’ireo olona fa mangetaheta te hifidy avokoa izy ireo, izay voalazan’ny lalana fa manana zo hifidy. “Tsy misy azonay atao intsony hoy ny nambaran’ny Randriamanarivo Alfred, tompon’andraikitra eny amin’ny fokontanin’Ankasina momba ity tsy fatomombanan’ny lisi-pifidianana ity na dia mampiaka-peo aza ireo olom-pirenena marobe.
Mbola ao anaty lisitra ny maty
Tsy eny Ankasina ihany fa iharan’izany ihany koa ny teny amin’ny fokontanin’Ankazomanga, Andranomahery Ankorondrano, 67 Ha Avaratra Andrefana, Andravoahangy… Betsaka no mitaraina noho ny tsy fahazoana kara-pifidianana sy tsy voasoratra ao anaty anaty lisi-pifidianana, ary ny fahitana fa mbola tafiditra ao anatin’ny lisitry ny mpifidy ny maty rehefa nanamarina izany teny amin’ny fokontany nisy azy. Nomarihin’izy ireo tamin’izany fa mbola tsy very zo ny tenany ka tsy tokony hofoanana tsy ho isan’ny mpifidy. Misy mantsy ny milaza fa efa tao anaty lisitra ny anarany teo aloha, saingy tsy tafiditra intsony. Amin’izao andro vitsy sisa hiatrehana ny fifidianana izao, tsy afaka manao inona na inona intsony ireo olom-pirenena. Tokony hisy ny fandraisana fepetra hoy ny nambaran’ireo olon-tsotra, mba tsy hisian’ny fahaverezan-jon’ny mpifidy. Ho vitsy tanteraka izany ny tahan’ny mpifidy amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity. Mety hanao ahoana tokoa izany ny fizotran’ izany raha sahala amin’izany. Iza no tompon’andraikitra?